खेलबहादुरको ड रलाग्दो खेल्! लुटेरै किने काठमाडौँमा यत्रो जग्गा, परिवार र आफन्तको मसेत मिलेमतो – Dainik Sangalo
खेलबहादुरको ड रलाग्दो खेल्! लुटेरै किने काठमाडौँमा यत्रो जग्गा, परिवार र आफन्तको मसेत मिलेमतो
October 1, 2020 402
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे नगरपालिका–३ का खेलबहादुर तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनको नाम नै गज्जबको रहेको र उनको असली खेल झनै गज्जबको रहेको प्रहरी बताउँछ । खेलबहादुरले राजधानीका तीन जिल्लामा रहेर परिवार र गाउँलेसँग मिलेर लुट्ने गरेको खुलेको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
Prevसल्लाह नगरेरै राजदूत सिफारिसपछि ओली-प्रचण्ड भेटवार्ता अनिश्चित
Nextजिउँदो बि’रामीलाई अस्पतालले गर्यो मृ’त घो’षणा, आफन्तद्धारा अस्पताल घे’राऊ
दशैमा रमाउदै फर्किंदा बाटोमै बिते लालबाबु